काम गर्ने पीसीको लागि उत्तम निःशुल्क अनलाइन एन्टिभाइरस के हो? | ग्याजेट समाचार
पाको एल गुटेरेज | | सामान्य, सफ्टवेयर, Windows
भाइरसहरू, जुन अपरेटिंग प्रणालीको साथ कुनै पनि उपकरणको शत्रुको डर थियो, तर साथ विन्डोजको विशेष उल्लेख भए पनि यी ट्रोजन्सबाट कुनै प्रणाली छुट छैन। जब हामी कम्प्युटर खरीद गर्छौं हामी केवल ब्राउजि,, खेल्ने, सामग्री डाउनलोड गर्ने वा काम गर्ने बारे सोच्दछौं, हामी सोच्छौं कि कम्प्युटरलाई ठीक प्रकारले काम गर्नको लागि सुरक्षा कार्यक्रमको आवश्यक पर्दैन र यो सुरुमा त्यस्तो छ।
एउटा समय र धेरै डाउनलोडहरू पछि जब हामी कम्प्युटरमा समस्याहरू देख्न सक्छौं, ती सबै अनियन्त्रित डाउनलोडहरू, सबै प्रकारका पृष्ठहरूमा ती भ्रमणहरू र अन्य धेरै कम्प्युटरहरूमार्फत पारित पेन्ड्रिभ प्रयोग गर्ने साधारण बानीले तपाईंको कम्प्युटरलाई सबै कक्षा लिन सक्दछ। तपाईंको कम्प्युटरलाई तौल गर्न असक्षम मालिसियस फाईलहरू यसलाई पूर्ण रूपमा बेकार बनाउन। तर समस्या केवल प्रदर्शनको घाटा मात्र होईन हामी हाम्रो फाईलहरू वा व्यक्तिगत डेटा तेस्रो पक्षहरूमा उपलब्ध गराउन सक्दछौं जसले हामीबाट महत्त्वपूर्ण जानकारी चोर्न सक्छन्। हामी हेरौं कि कुन उत्तम हो जुन हामी निःशुल्क रूपमा फेला पार्न सक्छौं।
1 यो भुक्तानी वा एक निःशुल्क विकल्प प्रयोग गर्न राम्रो छ?
2 अवास्ट फ्री एन्टिभाइरस
3 AVG नि: शुल्क एन्टिभाइरस
4 कास्परपर्की एन्टिभाइरस नि: शुल्क
5 बिटडेफेंडर एंटीवायरस नि: शुल्क
6 पांडा नि: शुल्क एंटीवायरस
7 विन्डोज डिफेन्डरको सट्टा यी मध्ये कुनै पनि प्रयोग किन गर्ने?
यो भुक्तानी वा एक निःशुल्क विकल्प प्रयोग गर्न राम्रो छ?
यो सबै एक विशाल डाटाबेसमा तल आउँदछ, जुन यी कार्यक्रमहरूका पछाडि कम्पनीहरूले निरन्तर अपडेट गर्दछन् जसले सबै मालवेयर धम्कीहरू राख्न सक्दछ जुन हाम्रो टोलीलाई खाडीमा डार्न सक्छ। यस तरिकाले, जे भए पनि भाइरस कत्ति नयाँ छ, हाम्रो एन्टिभाइरसले यसको सामना गर्न सक्षम हुनेछ।
तर पनि मालवेयर बिरूद्ध यी एन्टिभाइरसको प्रभावकारिता महत्त्वपूर्ण छ, वा हाम्रो कम्प्युटरको प्रदर्शनमा प्रभाव पार्छकिनभने यी मध्ये केही कार्यक्रमहरूले हाम्रो प्रणालीलाई ढिलो गर्न सक्दछ स्रोतका उच्च खपतका कारण यसले पृष्ठभूमिमा गर्छ। हामीले यसको प्रयोगको सहजता वा यसको ईन्टरफेस कत्तिको सहज छ भन्ने कुरा पनि ध्यानमा राख्नुपर्दछ।
यस अर्थमा एक नि: शुल्क एंटीवायरस यसको भुक्तानी समकक्षहरु संग समान सर्तमा प्रतिस्पर्धा गर्दछ, भाइरस बिरूद्ध उही प्रभावकारिता र सबै भन्दा राम्रो प्रदर्शन र उपयोगिता स्कोर प्राप्त गर्न।
भिन्नता अतिरिक्त र उन्नत विकल्पहरूद्वारा बनाइएको हो जुन हामीले कम्पनीहरूको लागि खोजी गर्न सक्दछौं, तर व्यक्तिगत प्रयोगको लागि हामीले जेबमा बाहेक कुनै फरक देख्दैनौं।
हामी नि: शुल्क एन्टीवायरस को राजा मानिन्छ के साथ मजबूत शुरू, यो बजार मा सबै भन्दा राम्रो नि: शुल्क एन्टीवायरस को सूची बाट कहिल्यै हराउन सक्दैन। एक क्षेत्र जुन क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार सुरक्षाको सर्तमा अधिकतम प्रस्ताव गर्दछ, अन्यको स्तरमा जुन भुक्तान गरिएको छ र धेरै अन्य विकल्पहरू भन्दा माथि। यसको थप रूपमा, यसले उपयोगिताको सर्तमा सबै भन्दा राम्रो परिणामहरू प्राप्त गर्दछ, त्यसैले यो एक प्रभावकारी कार्यक्रम हो।
यदि हामी यसमा थप्दछौं कि सम्भावित खतराको चेतावनी देखा पर्दा यसलाई सम्हाल्न, कन्फिगर गर्न र बुझ्ने धेरै सजीलो हुन्छ र यसले हाम्रो कम्प्युटरको प्रदर्शनमा कम से कम सम्भावित प्रभाव पार्दछ। यो निस्सन्देह अवास्टलाई हाम्रो कम्प्युटरको लागि उत्तम सम्भव एन्टिभाइरस बनाउँछ, तर त्यसोभए यो छोटो नहोस् हामी अधिक विकल्पहरू दिइरहेका छौं किनकि अरूलाई अझ राम्रा वा रंगीन लाग्न सक्छ।
AVG नि: शुल्क एन्टिभाइरस
AVG सँग नि: शुल्क संस्करण छ तर सशुल्क संस्करण पनि छ। नि: शुल्क विकल्पमा सबै प्रकारको वास्तविक मालडियस अपडेट, लि link्क ब्लक गर्ने, डाउनलोडहरू र प्रदर्शन विश्लेषणको मालवेयर विश्लेषण छ हाम्रो टीमको।
यो यसको भुक्तान संस्करण भन्दा केही सीमित छ, तर सुरक्षा स्तरमा तिनीहरू वास्तवमा उस्तै हुन्, त्यसैले यसको भुक्तानी सल्लाह दिन गाह्रो छ। सुरक्षाको एक असुरक्षित स्तर धेरै विशेषज्ञहरूको अनुसार प्रयोगको सहजता र कन्फिगरेसनको रूपमा प्रमुख आकर्षणको रूपमा र हाम्रो उपकरणको प्रदर्शनलाई मुश्किलले बाधा नगरी।
कास्परपर्की एन्टिभाइरस नि: शुल्क
अरूहरूमा जस्तै, हामीसँग सशुल्क संस्करण र नि: शुल्क संस्करण छ, स्वतन्त्र संस्करणमा हामीले स्रोतहरूको अत्यधिक खपतका कारण सम्भावित प्रदर्शन घाटाको बारेमा चिन्ता लिनुपर्दैन, किनकि प्रभाव पूर्णतः निरुत्साहित छ।
यस कार्यक्रमले हामीलाई मालवेयरका सबै प्रकारहरू विरूद्ध पूर्ण सुरक्षा प्रदान गर्दछ र हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि विशिष्ट सुरक्षा उपकरणहरू छन्। यद्यपि हामीसँग नि: शुल्क एन्टिभाइरसहरूमध्ये यो उत्तम छैन, यसको सशुल्क संस्करण उत्तम सम्भव भुक्तान गरिएको एन्टिभाइरस बीच हो।
बिटडेफेंडर एंटीवायरस नि: शुल्क
एन्टिभाइरस स्क्यानर खोज्ने प्रयोगकर्ताहरूको लागि उत्कृष्ट विकल्प जुन स्थापना पछि चीजहरू जटिल गर्दैन। यो पृष्ठभूमिमा पूर्ण रूपमा चलाउनको लागि डिजाइन गरिएको हो, यसले कुनै प्रकारको शicious्कास्पद गतिविधिको मामलामा मात्र हामीलाई आवश्यक सूचनाहरू देखाउँदछ। विश्लेषण, पत्ता लगाउने र मालवेयर हटाउने स्वत: बाहिर गरिन्छ।
स्क्यानर वास्तवमै छिटो हुन्छ, स्टार्टअप पछि केहि मिनेटमा सबै फाइलहरू र फोल्डरहरू प्रशोधन गर्न।। यससँग एन्टि फ्रड र एन्टी फिसि protection संरक्षण कार्यहरू छ, यसले तिनीहरूलाई चिन्ह लगाउँदछ र डेटा चोरी रोक्नको लागि तिनीहरूलाई पत्ता लगाउने बित्तिकै तपाईंलाई सजग गराउँछ। यदि तपाईं एक राम्रो, परेशानी-रहित पृष्ठभूमि स्क्यानरको खोजीमा हुनुहुन्छ भने, यो विकल्प निश्चित रूपमा तपाइँको मनपर्नेहरू बीच हुनुपर्दछ।
राष्ट्रिय विकल्प यस सूचीबाट हराउन सकिएन, यो स्पेनी कम्पनी हो बिल्बाओ र म्याड्रिडमा आधारित। यसका अतिरिक्त, यसले सेक्टरमा सबैभन्दा धेरै प्रविधिको टेक्नोलोजी प्राप्त गर्दछ।
यो यसको प्रयोग को सरलता, इन्टरफेस, र अद्वितीय डिजाइन को कारण लोकप्रिय छ। तर मुख्य कारण यसको आभासी निजी नेटवर्क (VPN) बाट आउँछ। एक VPN ले तपाइँको इन्टर्नेट जडान सुरक्षित सर्भरमा फर्वार्ड गरेर कार्य गर्दछ। सबै डेटा जुन तपाईंको कम्प्युटरमा प्रवेश गर्दछ र छोडिन्छ क्रिप्टमा हुन्छ, जुन ट्रोजनलाई तपाईंको इन्टरनेट ट्राफिक पहुँच गर्नबाट रोक्छ। सुरक्षाको यो स्तर अत्यधिक सिफारिस गरिएको छ यदि हामी सार्वजनिक ईन्टरनेट नेटवर्क प्रयोग गर्दछौं भने।
जबकि पांडाको VPN नेटवर्क नि: शुल्क छ, तर प्रति दिन १M०MB मा सीमित छ। त्यसैले यो केवल हामीलाई नेभिगेट र मेल प्रयोग गर्न को लागी सेवा प्रदान गर्दछ। यदि हामी के चाहन्छौं भने डाउनलोडका बिरूद्ध हामीलाई जोगाउन यो हो, हामीले यसको सशुल्क संस्करणमा जानु पर्छ।
विन्डोज डिफेन्डरको सट्टा यी मध्ये कुनै पनि प्रयोग किन गर्ने?
सामान्य कम्प्युटि inमा विन्डोज डिफेन्डर आधारभूत आवश्यकताहरूको लागि धेरै राम्रो उत्पादन हो, यसले मालवेयर पत्ता लगाउँदछ र यसबाट हामीलाई अन्य प्रोग्रामहरू जस्तो सुरक्षित राख्दछ। तर यसले अन्य धेरै किसिमका धमकीहरू विरूद्ध सुरक्षा प्रदान गर्दैन जस्तै ransomware वा धोखाधडी।
धेरै नि: शुल्क विकल्पहरू, यद्यपि सूचीमा नदेखिने केहीहरू, जस्तै अविरा, ले हामीलाई डिफेन्डरले जोगाउने सबै कुरा र हामीलाई नचाहिने अन्य धेरैको बिरूद्ध संरक्षण गर्दछ। त्यसोभए यो कुनै कुरा भन्दा राम्रो छैन, अवश्य पनि, तर म हाम्रो सुरक्षा तपाईंको हातमा छोड्ने सल्लाह दिदिन।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » सफ्टवेयर » काम गर्ने पीसीको लागि उत्तम निःशुल्क अनलाइन एन्टिभाइरस के हो?